Indwangu enezinaliti zokugaya - ukubopha intombazane eneminyaka engama-1-2 ubudala ngencazelo, amaphethini ekunqumeni izinaliti zokugqoka amajazi
Omama nabakhulukazi bamantombazane banesikhala esikhulu sokwakha. Amakhosazana akhe angenza futhi ahlobise, ngisho nezingubo zokugqoka, agqoke njengezidoli. Ngemuva kokufunda isihloko sethu, uzofunda ukuthi ubophe ijazi elihle nelinemfashini.
Ingubo eboshwe ngezingane enezinyosi zokugaya ngencazelo
Kule ngubo intombazane yakho iyoba yinhle kunazo zonke, ngoba ekukhiqizeni kwayo iphethini elidumile le-pearl lisetshenzisiwe. Ingubo yenzelwe izingane ezineminyaka engu-1 kuya kweyisithupha. Ngezansi uhlelo lwamaphetheni, amanani ahambisana nawo osayizi afanele kwisigaba esithile. Isibonelo, ububanzi bomkhonto obanzi obukhulu bomntwana oneminyaka elilodwa ubudala buyizingalo eziyisishiyagalolunye (9 cm), uma umuntu oneminyaka eyisithupha ubudala esikoleni eseneminyaka engu-6, lokhu kuyoba 13. Emiyalweni yethu, sizokhuluma ngokubopha intombazane eneminyaka engama-1.
Iphethini ilula kakhulu. Umugqa wokuqala yizikhonkwane zobuso. Owesibili yiyona yangaphambili, enye ehamba phambili enye. Umugqa wesithathu - futhi ubukeka nje kuphela. Okwesine - ubuso obuncane kanye ne-purl. Sasihlanganisa kanjalo kuze kube sekupheleni. Ukuze wenze i-backrest, shayela e-circular knitting izinaliti No. 3,551 nge-loop. Ngemuva kokuhlanganisa u-7 cm, qala ukuvala ama-hinges nxazonke emaphethelweni angu-6. Imikhono iqala ukuhlanganiswa kusuka ngezansi. Yenza i-band elastic 3 cm. Bese uqala ukubopha ngokulandela iphethini yephethini yeparele. Ngemuva kwe-6 cm, thinta u-2 loops ezengeziwe. Yenza lokhu njalo emigqeni emi-3, kuze kube nemipipu engu-52 ezinaleni zezintambo. Ngomsebenzi wamasentimitha angu-21, vala phansi ezakhiweni ezingu-7, uphumule konke okunye. Amashalofu ahlanganisiwe afana nomhlane, kodwa kudingeka akwenziwe ngokwehlukana. I-collar ihlanganiswe ne-band elastic ngokuhambisana nemingcele yentamo. Bese, yakha zonke izingxenye. Esikhundleni sezinkinobho ungasebenzisa i-zipper. Uma kungenjalo, kufanele ulungiselele umkhawulo. Uma esikhundleni separele ubhedu uhlelo lokusebenzisa i-classics, bese ukhetha umhlobiso omuhle emaceleni nasemashalofini angaphambili. Manje fashion is fashion. Kuyi-monogram yefomu elungile. Ungakwazi ukubopha izakhi ezingu-1-2 kuphela zephethini le-Aran, ijazi selizobe seluqala futhi lihle. Izigqoko zasehlobo ezenzelwe amantombazane zihlotshiswe kangcono ngemifantu evulekile. Izingubo ezinjalo zilula futhi zisebenza. Ngokukhiqiza kwabo, kungcono ukusebenzisa izintambo zikotini.
Indlela yokubopha ingubo yentombazane iminyaka engu-1-2: uhlelo olulula
Omama abancane amantombazane abangenalo ulwazi oluhle bangaba nzima ukusebenza namacebo amakhulu. Abaningi bavele baphelelwa yithemba futhi babalekele esitolo ukuze bathenge ingubo, eboshwe efektri. Ungasheshi ukulandela isibonelo sabo. Sebenzisa kangcono incazelo yethu. Siyabonga, ungakwazi ukuxhuma nemikhiqizo emikhulu, futhi imancane kakhulu - izingane kuze kube unyaka.
Ukulungisa ingubo yentsana eneminyaka eyodwa, uzodinga u-350 g wezinhlamvu nenaliti No. 5.5. Indwangu iboshiwe ngaphandle kwemigqa, ngendwangu eyodwa, isuka eshalofini lesokudla. Lezi zinhlelo azihambisani nemigomo yemikhiqizo yomntwana omncane. Kuzodingeka uzibale wena ngokwakho ngokulinganisa umjikelezo wesifuba, isisu nesingane. Uma uhlanganisa ishalofu elungile, thayipha izinhlamvu ezengeziwe zomkhono. Endaweni yentamo, vala u-10-13 cm. Uma usebenzisa ishalofu lesokunxele, akudingeki wenze lokhu. Ngaphezu kwalokho, kuphela ikhola eyenziwa. Ihlanganiswe ne-band elastic futhi ikhonjiswe kumkhiqizo omkhulu.
Kulesi sigaba, isisindo sokubukeka kwesibuso kanye nokusikwa kwe-garter kusetshenziswa. Ukuze umhlobiso, ungenza ama-harnesses. I-spikelet yase-Asia lapha ngeke ibe yinto engafanelekile, kodwa amabhande alula azokulingana ngokuphelele. Bheka kahle i-aslazykie scallops. Kodwa ubucwebe obuvulekile abukhuthazwa, ngoba lo mkhiqizo wenzelwe ama-pores abandayo.
Indwangu yesifazane enezinyosi zokugqoka: umdwebo kanye nencazelo
Kulesi sigaba uzothola incazelo yokubopha ijazi elimangalisayo labesifazane. Amaphethini afanelekile anikezela lo mkhiqizo isipho esikhethekile. Ngeke uyenze nge-hook, ngakho-ke ulungiselele izinombolo ezingu-4 zezinombolo ezingu-40. Uzodinga futhi uboya beboya, cishe u-400 g. I-Alpaca noma ikamela izokwenza. Cabanga ngenqubo yokubopha ingubo yobukhulu obungama-42. Ngemuva kwe-backrest, thatha amakhilogremu angu-127 namasentimitha angu-2 ahambisane nephethini leparele. Bese wenze iphethini yesibindi.
Ngemikhono ekuphakameni okufanelekile, okokuqala kokuvala okungu-3 emgqeni ngamunye wesibili izikhathi ezimbili, bese kuthi izikhathi eziyisithupha ziyingxenye eyodwa ngayinye. Ukuqala ukwenza ama-armholes, vala izinsimbi zomphakathi entanyeni ngesamba samaphesenti angu-31. Ngokuba amashelufu azodinga amalokhi angu-78. Futhi u-2 cm uzoya enqenqemeni. Khona-ke iphethini ikhonjisiwe. Ngesikhathi sokuphakama kwe-16.5 kusukela ekuqaleni kokubunjwa kwe-armhole, vala u-hinge loops ngesikhathi sokuqala kanye nezicucu ezingu-27, bese ufika emigqeni engu-2 ube nezingcezu ezingu-3. no-1 piece, isikhathi esingu-8 izikhathi ezingu-8 ngayinye. Imikhono iqala ukuhlanganiswa kusuka kumaskhi angu-62. 2 cm ukusuka ngezansi iphethini yeparele. Khona-ke, 2 cm emaphethelweni - onqenqemeni, amaphuzu angu-44 asele - iphethini enkulu ye-braid arans. Ngomugqa ngamunye wesikhombisa faka i-1 loop ezinhlangothini zombili. Yenza lokhu izikhathi ezinhlanu. Ngemuva kwe-cm 35, vala izinwele ezintathu ezihlangothini zombili. Ezikhathini ezintathu ezalandela ukuvala uchungechunge lwezingodo ezimbili, izikhathi ezine - eyodwa, izikhathi eziyisithupha - ezimbili kanye nezikhathi ezintathu - ezine. Ngemuva kwe-2.5 cm kusukela ekuqaleni kokwakhiwa kwe-pullback, vala ukubopha.
I-collar yenziwe ngezigaba ezimbili, ubukhulu bayo kufanele buhambisane nentamo. Izinto ezitholakale ziqoqwe ngomkhiqizo owodwa. Le-cape-cape ayidingi ukufakwa kwezikhiye. Kuzokwanela ukuba nenkiyomunye yevolumu entanyeni.
Amamodeli nezithombe zezingubo eziboshiwe zowesifazane 2016-2017
Ngonyaka we-2016, ekugqibeleni kokuthandwa kwezingubo zokukhanya. White, beige, ithenda pink noma blue, kuyoba umhlobiso best of ikhabethe lakho. Ngo-2017, uhlelo lombala luhlukile kakhulu. Lapha kukhona imikhiqizo ye-shades ekhanyayo egcwele: i-burgundy, ephuzi futhi ephuzi. Imfashini isalokhu igcina izingubo ezinhle zesihlabathi.
Ikholomu yesiNgisi ku-knitwear iba umqondo obaluleke kakhulu. Kunemihlobiso eyengeziwe engafanele. Isimiso esiyinhloko senziwa kangcono emaphethini.
Ama-Scheme kanye nezincazelo zejazi elinamasiza wokugaya: ukusiza abaqalayo
Uma usuqala, ungazami ukuqala ukusebenza ngengubo yakho. Uma ngabe umkhiqizo wengane kungenzeka ube ngaphakathi kwakho, ukugqoka okudala kudinga isikhathi esengeziwe nokubekezela. Ngakho-ke, okokuqala kungcono ukuzama ukubopha ingubo enhle yengane.
Ukuhlupheka kokuqala okuhlangabezane nesisebenzi esinesiqiniseko sokuqala kumaphethini. Ukwenza kube lula ngawe, sinikeza ukukhohlisa okuthakazelisayo. Uzodinga ukusika umkhiqizo oqediwe ezingxenyeni zayo bese uwadlulisela ephepheni. Amaphethini amakhulu okuphila enza umsebenzi ube lula.
Enye inkinga ukungakwazi ukufunda imidwebo. Ukubopha ingubo, kudingeka wenze okungenani iphethini elula. Ngokuya kusayithi lethu, ungakhohlwa ngalolu bunzima. Siphakamisa ukubuka ividiyo yokuqeqesha ukuthi ungafunda kanjani ukwaziswa kwimidwebo.
Ijubane elinomfudumalo labafazi elinesibonelo sezinyosi zokubopha
Sazibophezela isana esinezinyosi zokugqoka - isethi ngezandla zethu
Ama-overalls amantfwana asanda kuzalwa anezinaliti zokugaya abaqalayo
Konke mayelana nenkontileka yomshado
Imfashini yamahlombe amakhulu?
Izipho ezinhle kakhulu zamantombazane kaMashi 8
Ukupheka ama-crepes asondayo amnandi
Indlela yokukhetha i-honeycomb enhle
Yiziphi izitsha ezingenziwa ngesipinashi
Indlela yokufundisa ingane ukuphuza ebhodleleni?